အိမ်တွင်းမှာ အသက်ရှူပြဿနာတွေ ကင်းဝေးစေဖို့ – XB Media Myanmar
1. အိမ်ထဲကို အပြင်က လေလေးတွေ ဝင်အောင်လုပ်ပါ။
အိမ်တွေမှာ လေဝင်လေထွက်ကောင်းဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒီတော့ ရာသီဥတုကောင်းပြီးတော့ အပြင်မှာ ပန်းဝတ်မှုန်တွေ ပျံ့နေတာလည်း နည်းလာပြီး အမှုန်တွေလည်း နည်းလာပြီဆို ရ င်တော့ ပြတင်းပေါက်တွေနဲ့ တံခါးတွေကို ဖွင့်ထားပါ။ အထူးသဖြင့်တော့ ဆေးသုတ်ထားတဲ့၊ ချက်ပြုတ်တဲ့ အနံ့တွေရှိနေရင် တံခါးတွေဖွင့်ထားဖို့ လိုပါတယ်။
2. ရိုးရှင်းတဲ့ အိမ်သန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းတွေကိုပဲ သုံးပါ။
့အိမျသနျ့ရှငျးရေးပစ်စညျးတှမှော ဓာတုပစ်စညျးပွငျးပွငျးတှပေါလို့ အသကျရှူပွူနာတှေ (သို့) ဓာတျမတညျ့တာတှနေဲ့ ပနျးနာရငျကွပျထတာတှေ ဖွဈစနေိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဒီပစ်စညျးတှေ ဝယျမယျဆိုရငျ ပါဝငျပစ်စညျးတှကေို သခြောဖတျပွီး အငှေ့ပွနျစမေယျ့ ဓာတျပေါငျးတှေ၊ အမှှေး နံ့ေ တှနဲ့ မီးလောငျလှယျတာတှပေါရငျ မဝယျပါနဲ့။ ရိုးရိုးဆပျပွာတောငျ့၊ ရေ၊ ရှာလကာရညျ (သို့) မုနျ့ဖုတျဆိုဒါတှေ သုံးပွီး ကိုယျ့ဟာကိုယျလုပျလို့လညျး ရပါတယျ။
3. အိမ်ထဲမှာ စိုက်လို့ရတဲ့ အပင်လေးတွေ
အထူးသဖွငျ့ ကိုယျ့ရဲ့အိမျက လဝေငျလထှေကျ မကောငျးဘူးဆိုရငျ ဒီအပငျလေးတှကေ အလှ ဆငျတယျဆိုတာထကျ ပိုပွီးအကြိုးရှိပါတယျ။ ဒီအပငျလေးတှကေ ကာဗှနျဒိုငျေ အာကျဆိုဒျတှေ ကို ဖယျရှားပေးပွီးတော့ အောကျဆီဂငြျ ထုတျပေးရုံသာမကဘဲနဲ့ တခြို့အပငျတှဆေိုရငျ လေ ထဲ က ဓာတုအငှေ့တှကေိုတောငျမှ ဖယျပေးနိုငျပါတယျ။ ဒီထဲကမှ စိုကျရလှယျပွီးတော့ ကနြျး မာေ ရးအတှကျကောငျးတဲ့ အပငျတှကေတော့ English ivy, ficus trees, peace lilies နဲ့ အခြို့သော ထနျးပငျအမြိုးအစားတှေ ဖွဈပါတယျ။
4. အဲကွန်းတွေ၊ heater တွေက ဇကာလေးတွေ
အဲကွန်းက ဇကာလေးက ညစ်ပတ်နေရင် လေဝင်လေထွက် ကောင်းသင့်သလောက် မကော င်းတော့ဘဲ မှိုတွေ တက်လာပြီးတော့ ညစ်ပတ်နေနိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ ဒါကို အနည်းဆုံး ၃ လတ စ် ကြိမ် လဲပြီး သေချာဆေးပေးပါ။ မိသားစုထဲမှာ ပန်းနာရင်ကြပ်ရှိရင်၊ ဓာတ်မတည့် တတ်တဲ့သူတွေရှိရင် တစ်လတစ်ခါ စစ်ကြည့်သင့်ပါတယ်။ ကျွမ်းကျင်တဲ့သူကိုခေါ်ပြီးတော့ တစ်နှစ်တစ်ကြိမ် စစ်ဖို့လိုပါတယ်။
အိမျထဲမှာ မှိုတှရှေိနပွေီဆိုရငျ ဒီက အမှုနျသေးသေးလေးတှကေ လထေဲမှာ လှငျ့နပွေီးတော့ နှာခေါငျးတှေ၊ လညျခြောငျးတှထေဲကို ဝငျနိုငျပါတယျ။ ဒီအခါမှာ ဓာတျမတညျ့ တဲ့လက ်ခဏာေ တွှ ဖဈတဲ့ နှာခြေ၊ ခြောငျးဆိုးခွငျးနဲ့ အခွားအသကျရှူပွူနာတှကေို ကွုံတှေ့စနေိုငျပါတယျ။ မှိုတှကေ စိုစှတျတဲ့နရောတှမှော ဖွဈတတျလို့ ရခြေိုးခနျးကို တတျနိုငျသမြှ ခွောကျသှေ့ေ အာငျထားပါ။ ရခြေိုးပွီးရငျ ပနျကာဖှငျ့တာဖွဈဖွဈ၊ ပွတငျးပေါကျဖှငျ့ထားတာဖွဈဖွဈ လုပျပါ။ ပွီးရငျ စိုနတေဲ့တဘကျတှနေဲ့ လြှောျပွီးသားအဝတျတှကေို သခြောလှနျးပါ။ ရပေိုကျခေါငျးတှနေဲ့ တခွားနရောတှမှော မှိုစှဲနတောတှေ့ရငျ မကွာခဏ သနျ့ရှငျးရေးလုပျပေးဖို့ လိုပါတယျ။
6. ရှူးရှူးဖြန်းတဲ့ လေသန့်စင်စေတဲ့ဟာတွေကို တတ်နိုင်ရင် မသုံးပါနဲ့။
ဒီကထွက်တဲ့ မွှေးတဲ့အနံ့တွေကတောင်မှ ဒုက္ခပေးနိုင်ပါတယ်။ တချို့တွေမှာဆိုရင် နှာခေါင်းနဲ့ လည်ချောင်းကို ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေ ပါ,ပါတယ်။
7. လတ်ဆတ်တဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့ သစ်သီးတွေကိုပဲ ထားပါ။
ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ သစ်သီးတွေကို အကြာကြီးထားထားရင် မှိုတက်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သိမ်းထားတဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့သစ်သီးတွေကို မကြာခဏစစ်ကြည့်ပြီး မှိုတက်ေ နပြီ ဆိုရင် လွှင့်ပစ်လိုက်ပါ။ ဒါတွေကို ပိုပြီးကြာရှည်ခံဖို့အတွက်ဆိုရင် ရေမဆေးဘဲ သိမ်းပါ။ စားခါနီးမှပဲ ရေဆေးစားပါ။ လတ်ဆတ်လား၊ မလတ်ဆတ်လား မသေချာရင် လွှင့်ပစ်လိုက်ပါ။
ီအကောငျတှကေ သသှေားရငျတောငျမှ ဒုက်ခပေးနိုငျပါတယျ။ သသှေားတဲ့အခါမှာ သူတို့ရဲ့ ခန်ဓာကိုယျအစိတျအပိုငျးလေးတှေ အစစကှဲပွီးတော့ လထေဲပါနိုငျသလို သူတို့ရဲ့ခြေးတှလေညျး လထေဲလှငျ့နပွေီးတော့ အိပျရာခငျးတှေ၊ ခေါငျးအုံးတှေ၊ အခွားခညြျထညျတှမှော ကပျနပွေီးေ တာ့ ပနျးနာရငျကွပျထတာနဲ့ ဓာတျမတညျ့တာတှေ ဖွဈနိုငျပါတယျ။
ဘေစင်တွေ၊ အိမ်သာတွေ၊ ရေချိုးခန်းတွေ၊ ပန်းကန်ဆေးစက်တွေနဲ့ ရေခဲသေတ္တာတွေမှာ ယိုစိမ့်မှုတွေဖြစ်ရင် ရေတွေထွက်လာပြီးတော့ အိုင်နေတဲ့အခါမှာ မှိုတွေ၊ ပိုးဟပ်တွေ စတဲ့ ပြဿနာတွေဖြစ်လာနိုင်လို့ ဒီလိုဖြစ်ရင် ချက်ချင်းပြင်ဖို့ လိုပါတယ်။
10. အစားအစာ အကြွင်းအကျန်တွေ
ပိုးဟပ်တွေက ရေထက် အစားအစာတွေကို ပိုကြိုက်ပါတယ်။ စားပြီးသား ပန်းကန်တွေကို မဆေးဘဲထားရင် သေချာလုံအောင် အုပ်ထားပါ။ အစားအစာတွေ လွှင့်ပစ်ရင်လည်း အဖုံးသေချာဖုံးထားတဲ့ အမှိုက်ပုံးထဲကို ပစ်ပါ။
ခှေးလေး၊ ကွောငျလေးတှရေဲ့ အမှေးတှနေဲ့ သူတို့အပွငျကနေ သယျလာတဲ့ ဓာတျမတညျ့ေ စတဲ့အရာတှကွေောငျ့ အဆုတျကို ထိခိုကျစနေိုငျပါတယျ။ သူတို့ကို အိပျခနျးအပွငျဘကျမှာ ထားပွီးတော့ အိပျခနျးထဲ မဝငျခိုငျးတာ အကောငျးဆုံးပါပဲ။ ဒီလိုမှမဟုတျရငျတော့ ရမှေနျမှနျ ခြိုးပေးပွီးတော့ သူတို့နတေတျတဲ့နရောတှကေို သခြောသနျ့ရှငျးရေးလုပျပါ၊ ဖုနျစုပျပါ။
12. သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရင် ကျန်ခဲ့တတ်တဲ့နေရာတွေ
ဗီရိုအပေါ်တွေနဲ့ တခြားနေရာတော်တော်များများကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့ မေ့တတ်ပါတယ်။ ဒီနေရာတွေကို ဆပ်ပြာရေနွေးနွေးနဲ့ မကြာခဏ ပွတ်ပေးပါ။ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ကို အစာကျွေး တဲ့ခွ က်ကိုလည်း နေ့တိုင်းဆေးကြောပြီးတော့ အဆီတွေ၊ အစာတွေ၊နဲ့ ရေတွေ တင်နေနိုင်တဲ့ အခြားနေရာတွေကိုလည်း သေချာကြည့်ပါ။
13. အိပ်ရာခင်းနဲ့ ခေါင်းအုံးစွပ်တွေ
အိပ်ရာခင်းတွေ၊ ခေါင်းအုံးစွပ်တွေ၊ စောင်တွေကို တစ်ပတ်တစ်ခါ အပူချိန် 130°F ရှိတဲ့ ရေပူထဲမှာ လျှော်ပေးရင် ဖုန်တွေ၊ မှိုတွေ၊ သန်းတွေနဲ့ တခြားအရာတွေကို ဖယ်ရှားပေးရာ ရောက်ပါတယ်။
ချည်တွေမှာ အမှုန်တွေနဲ့ တခြားဓာတ်မတည့်စေတဲ့အရာတွေ ကပ်နေနိုင်တဲ့အတွက် အိမ်မှာ သုံးမယ်ဆိုရင် တတ်နိုင်သမျှ သားရည်တွေနဲ့ ဗီနိုင်းသားတွေ သုံးပါ။
သစ်သားလိုမျိုးမာတဲ့ ကြမ်းပြင်တွေမှာ ကော်ဇောတွေလိုမျိုး အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကို ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့အရာတွေ စုပုံမနေနိုင်ပါဘူး။ ကော်ဇော ခင်းထားရင်တော့ တစ်ပတ်တစ်ခါ ဖုန်စုပ်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။
ဆီးချိုကို ထိန်းညှိပေးနိုင်တဲ့အပြင် ခရမ်းသီးစားသင့်တဲ့ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးများ